अध्यागमन डेनमार्क, पछि - वकिल डेनमार्क मा. सबै वकिल अनलाइन
वकिल डेनमार्क मा. सबै वकिल अनलाइन
अध्यागमन डेनमार्क, पछि
डेनमार्क थियो सम्म एक समाज संग कुनै प्रमुख जातीय विभाजन छ । तर, उद्योग गरेको जनशक्ति आवश्यक मा र आन्दोलन मा शरणार्थी को निम्न दशक परिवर्तन गर्न देश एक अधिक बहु-जातीय समाज । यो विषय मा भेला को एक चयन देखि सामाग्री को इतिहास को रूप मा लेख र स्रोत, जो मा विभिन्न तरिका संग सम्झौता गर्न अध्यागमन डेनमार्क पछिदोस्रो विश्वयुद्धको मा. दस लाख जर्मन समाप्त मा अन्य देशहरू पछि नाजी हार मा. दोस्रो विश्वयुद्धको मा.
तर पहिले पहिले युद्ध अन्त भएको थियो ।.
नागरिक जर्मन आउन डेनमार्क छ । रूसी सेना, उत्प्रेरित गर्ने तिर अगाडी पश्चिम, पछि जर्मनी थियो पराजय भोग्नुपऱ्यो मा अगाडि छ । यो थियो, अब डेनमार्क कार्य समर्थन गर्न शरणार्थी, अर्थात् छ । मान्छे, यदि देश थियो कब्जा डेनमार्क छ । कुल मा, राशि शरणार्थी - को डैनीश जनसंख्या, र यो एक ठूलो काम गर्न तिनीहरूलाई ठाँउ मा शिविरमा - छाउनी मा हल्यान्ड. र विद्यालय मार्फत देश । बस अन्त पछि युद्ध को धक्का को डैनीश राजनीतिज्ञ पठाएका जर्मन शरणार्थी घर, तर यो. विभाजन जर्मनी को प्रमुख शक्तिहरु बीच र ठूलो क्षेत्र को जर्मनी दिइएको थियो पोल्याण्ड थियो, फिर्ती को एक धेरै कठिन मामला छ । पहिलो, मा, अन्तिम जर्मन शरणार्थी देखि डेनमार्क छ । एक केहि साना प्रवाह शरणार्थी को आए मा डेनमार्क को मध्य. जब, मा आए खोल्न विरुद्ध विद्रोह साम्यवादी शासन मा हंगेरी, उत्प्रेरित सोभियत संघ मा हंगेरी र पिटे विद्रोह तल ।. भागे देश बाहिर छ । डेनमार्क कम. हंगेरी शरणार्थी, संग परिवार मा आइपुगेपछि समय थियो.
मा प्रवेश गर्न, डेनमार्क थियो, अझै पनि धेरै समाज । यो थियो को लागि आवश्यक श्रम, तथापि, चाँडै परिवर्तन । यो औद्योगिक पश्चिमी युरोप थियो जनशक्ति अभाव भएकोले मध्य.
डेनमार्क हल गर्न पहिलो समस्या सहित अतिरिक्त श्रम शक्ति देखि कृषि, जो बनेको थियो, अधिक र अधिक छ । आए पछि महिला मा एक ठूलो हदसम्म श्रम बजार । तर अझै पनि त्यहाँ थियो एक लागि आवश्यकता दिएको छ । मा आइपुगे पहिलो विदेशी कामदारहरूको वा अतिथि कामदारहरूको रूपमा, तिनीहरूले थिए भनिन्छ, त्यसैले, देशका यस्तो टर्की, पाकिस्तान र युगोस्लाभिया, को निमन्त्रणा मा डैनीश हाकिमहरूले. एकै समयमा, पहिलो वर्ष देखि शरणार्थी यस्तो स्पेन, पोर्चुगल र ग्रीस साथै देशका ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिका. आप्रवासी र शरणार्थी छलफल थिए मा मिडिया र कार्यस्थल. छैन कम से कम भएकोले बेरोजगारी वृद्धि गर्न थाले मा. नोभेम्बर, सामाजिक साझेदार र सरकार संग सामाजिक डेमोक्रेट मा नेतृत्व मा सहमत गर्न एक तत्काल रोक्न गर्न अध्यागमन को अतिथि कामदारहरूको । शरणार्थी, तर अझै पनि थिए डेनमार्क, उदाहरणका लागि, चिली र भियतनाम, जहाँ क्रमशः. तानाशाही र युद्ध कारण मानिसहरू भाग्न छ । मा, कम गर्न संसद एक æ (दैनिक बोली), जसको काम परिणामस्वरूप एक नयाँ व्यवस्था मा विदेशीहरू मा. मात्र प्रगति पार्टी विरुद्ध मतदान हुनेछ । व्यवस्था छ भएकोले भइरहेको एक लामो श्रृंखला को उपाय । परदेशी ऐन थियो केही रूपमा वर्णन गर्न संसारको सबैभन्दा उदार व्यवस्था मा विदेशीहरू: प्रधानमन्त्री, डेनमार्क व्यवस्था संग मिल्यो संसारको सबैभन्दा मानवीय शरण जबकि, आलोचकहरु भनेर औंल्याए, यो पनि सजिलो मा प्राप्त गर्न देश मा. सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था थियो सुधार गर्न को स्थिति शरणार्थी शरण खोज्नेहरूको. व्यवस्था यसरी निहित पनि एक कानूनी दाबी परिवार पुनर्मिलन लागि विदेशीहरू जो, छलफल भएको थियो एक मा धेरै वर्ष पछि । पहिले थिए माथि यो क्षेत्र मा, पहिलो पटक मा र मा, जहाँ -सरकारले साथ डैनीश जनता पार्टी को नियम मा परिवार. उदार अध्यागमन नतिजा मा गरम चर्चा अध्यागमन मा, र तामिल शरणार्थी देखि श्रीलंका, विशेष मा, आए देश मा अवधि - थियो, एक धेरै चर्चा अंक छ । टाउको लागि लोकप्रिय नाम हो रूढिवादी मन्त्री न्याय, एरिक - र आफ्नो मन्त्रालयले गरेको हैंडलिंग को तामिल शरणार्थी वर्ष मा. यहाँ राख्न - र मन्त्रालयले नै साथै कानून र संसदीय बहुमत, र आदेश रोक्न गर्न, परिवार पुनर्मिलन लागि. जारी राजनीतिक दबाव र æ ध्यान गर्न नेतृत्व अधिक खुलासे, र यो निर्णय थियो, कि सर्वोच्च अदालत गर्नुपर्छ एक अनुसन्धान प्रारम्भ गर्न । ø रिपोर्ट मा औंल्याए जनवरी, बीएल. एक । कि संसद गरिएको थियो, भ्रममा र प्रधानमन्त्री ü ज्ञात हुन छोडेका को उपचार को लागि तामिल परिवार पुनर्मिलन । टाउको समाप्त, त्यसैले, यो रूढिवादी-नेतृत्व सरकार जाने थियो जनवरी मा. डेनमार्क को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनमा लागि बाटो छापिएको फिर्ती को शरणार्थी झन् आए देश । संग -मा व्यवस्था हात सकेन शरणार्थी शरण खोज्न. यो आइपुगे विशेष देखि शरणार्थी को मध्य पूर्व, कारण को इरान-इराक युद्ध र संघर्ष इस्राएलका र प्यालेस्टाइन बीच छ । एक विशेष हाँगा यो संघर्ष थियो कि सत्तरी, फिलीस्तीनियों मा मा सारियो åå, कोपेनहेगन, जहाँ तिनीहरू थिए.
यो धेरै दिनुभयो छलफल र नेतृत्व गर्न डैनीश संसद मा अपनाए एक विशेष व्यवस्था दिनुभएको फिलीस्तीनियों शरण.
मा सुरु भएको एक नागरिक युद्ध मा सोमालिया, र एक लाख भन्दा बढी.
केही समाप्त डेनमार्क मा, र आए धेरै अधिक संग यहाँ पृष्ठभूमि मा ø. सात सय डेनमार्क, र तिनीहरूले प्रतिनिधित्व सबै भन्दा ठूलो अफ्रिका देखि. साथै, कुर्द देखि इराक मा युद्ध पछि - आए ठूलो आगमन को मा पश्चिमी युरोप पूर्व युगोस्लाभिया देखि. शरणार्थी समाप्त पश्चिमी युरोपेली देशहरू जबकि, त्यहाँ थियो बारेमा कुरा तीन लाख आंतरिक विस्थापित छ । को विशाल बहुमत पश्चिमी युरोपेली देशहरू दिनुभयो शरणार्थी देखि पूर्व-युगोस्लाभिया, अस्थायी शरण. त्यसैले, पनि डेनमार्क मा, जहाँ यो डैनीश संसद मा अपनाए तथाकथित, - गर्न सक्षम हुन देश मा रहन को एक न्यूनतम को लागि छ महिना को संभावना संग विस्तार । व्यवस्था मा भएको थियो पछि एक नयाँ विशेष व्यवस्था, यति-भनिन्छ, जहां पूर्व- प्राप्त गर्न सक्षम हुन एक निवास परमिट डेनमार्क मा. एकै समयमा, यो को गर्न प्रवासिहरु डेनमार्क त्यहाँ थियो एक सक्रिय चर्चा छ । नगरपालिका को र लिन इन्कार बढी शरणार्थी र को गठन - ø, डेनमार्क, र ø - विषय थियो आलोचना । क्रम मा स्टेम को आलोचना बढ्दै द्वारा अपनाए सरकार, मा कानून र एकीकरण कानून संग, अरूलाई बीचमा, एक परिचय सेवा, जहां शरणार्थी र प्रवासिहरु थियो कम सामाजिक लाभ भन्दा. यो ट्रिगर देखि आलोचना र मानवीय संगठन, र वर्ष मा, सामाजिक सेवा फेरि बराबर छ । को कंस्ट्रेन्ट्स, तर, जारी अन्तर्गत रूढिवादी जो सरकार, मा शक्ति आए. जनता पार्टी थियो, बाहिर एक नम्बर को उपाय मा शरणार्थी र अध्यागमन. पहिलो पटक मा, जो, अन्य कुराहरु थिए सन्दर्भमा परिवार पुनर्मिलन को परिचय सहित, यो त-भनिन्छ -å. को प्रवृत्ति संग उपाय जारी दशक । आरहूस संस्कृति र लागि इतिहास र क्लासिक ई. आरहूस.
उत्तराधिकार मा व्यवस्था जर्मनी - अंग्रेजी-जर्मन वकिल - व्यवस्था कडा
পরীক্ষা আপনার পে - ø
© 2021 वकिल डेनमार्क मा. सबै वकिल अनलाइन